ट्याग: रेफरर स्पाम | Martech Zone
ट्याग: रेफरर स्पाम
के तपाईंले कहिल्यै गुगल एनालाइटिक्स रिपोर्टहरू जाँच गर्नुभयो मात्र केहि अजीब सन्दर्भहरू रिपोर्टहरूमा पप गर्दै? तपाईं आफ्नो साइट मा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईं को कुनै उल्लेख छैन तर त्यहाँ अन्य अफरहरु को एक टन छ। अन्दाज गर्नुहोस्? ती व्यक्तिहरूले वास्तवमै तपाईको साइटमा यातायातलाई उल्लेख गर्दैनन्। कहिले यदि तपाईंले गुगल एनालिटिक्सले कसरी काम गर्नुभयो भनेर महसुस गर्नुभएन भने, मूल रूपमा प्रत्येक पृष्ठ लोडमा पिक्सेल थपिएको छ जुन डाटाको एक टन लिन्छ र